Kup ayaa sheegtay in Warshadaynta Muraayadaha AR -ka dib loo dhigay ilaa Dabayaaqada 2022 | Waxaan ka imid mac
Kup ayaa sheegay in soo saaridda muraayadaha AR ay dib u dhacayso ilaa dhammaadka 2022
In kasta oo aan haysanno dhowr maalmood oo wararka badankoodu ay ku jiraan dhacdadii Isniintii la soo dhaafay halkaas oo lagu soo bandhigay aalado cusub sida MacBook Pro iyo AirPods, haddana waa inaan maanka ku haynaa inay wax badan ka jiraan shirkadda Mareykanka. In muddo ah hadda, waxaa lagu xaman jiray joogitaanka muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay mar labaadna waxay ku boodaan xagga hore waxaanan leenahay sida uu qabo falanqeeye Kuo, waxsoosaarkooda waxaa dib loo dhigay ilaa dhamaadka sanadka 2022.
Dhammaan annaga oo raaca wararka Apple, wararka xanta ah iyo aaladaha suurtagalka ah ee summaddu suuqa ka bilaabi karto, ogow in lagu shaqaynayo nooc ka mid ah muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay. Si kastaba ha ahaatee, ma jiro war wanaagsan oo iyaga ku saabsan. Waa inaan sugnaa dhowr bilood wax ka badan intii la filaayaymaaddaama shirkaddu hadda la rajaynayo inay bilawdo wax -soo -saarkeeda qaybteeda rubuca afaraad ee 2022.
Falanqeeye Ming-Chi Kuo oo qoraal ugu qoray maalgashadayaasha, ayaa sheegay in soosaarka ballaaran ee muraayadaha AR ee ugu horreeya ee Apple Waxaa dib loo dhigay ilaa dhammaadka sannadka dambe. Markay shirkadu naqshadaynta iyo tafaasiisha ka saarto nidaamka deegaanka. Kuo wuxuu horey u saadaaliyay in aaladda la bilaabi doono rubuca labaad ee 2022.
AR / MR HMD waxay u baahan tahay shuruudaha naqshadeynta warshadaha oo aad uga badan kuwa casriga ah. Sababtoo ah raaxada adeegsiga waxay ku lug leedahay faahfaahin badan oo naqshadeyn ah. Sidaa darteed, waxaan aaminsanahay in Apple ay sii waddo tijaabinta xalka ugu wanaagsan ee naqshadeynta warshadaha illaa iyo hadda.
Qalabkan cusub ayaa la filayaa inuu noqdo mid dhinacyo badan taabanaya, taas oo aan ku habboonayn oo keliya ciyaaraha fiidiyowga sida Sony PlayStation VR ama badeecadaha Oculus ee Facebook. Sidan oo kale, caqabadda dhisidda aasaas adag ee softiweer, nidaamka deegaanka iyo adeegyada ayaa ka weyn badeecadaha hadda jira, taasoo ka dhigaysa mid aad u adag oo waqti qaadata intii la filayay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Kup ayaa sheegay in soo saaridda muraayadaha AR ay dib u dhacayso ilaa dhammaadka 2022
Ross Young wuxuu leeyahay waxaan arki doonnaa 27-inji ah iMac mini-LED iMac horaanta 2022
Apple waxay si rasmi ah u xaqiijineysaa in Astaamaha Kontoroolka Caalamiga ah uusan imaan doonin ilaa Dabayaaqada dambe